ကင်မရာကိုပြတင်းပေါက် OS အတွက် universal UVC ကို USB ဗီဒီယိုအတန်းအစားယာဉ်မောင်းအဆင့်မြှင့် utility ကို | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ဇူလိုင်လ 18, 2014 admin ရဲ့ လြှောကျလှာ, မောင်းသူ 0
ဤမျှလောက်များစွာသောမောင်းသူက device အတွက်ပေါင်းစည်းသို့မဟုတ် system ကို operate, ဒါပေမယ့်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်ကွိုးစားအားထု can`t. ယခု UVC ကားမောင်းသူဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့ device ကိုထိရောက်မှု upgrade ပါလိမ့်မည်.
(UVC ကို USB ဗီဒီယိုအတန်းအစားယာဉ်မောင်းကသာ UVC device ကို suppoert)
If you are providingadriver forawebcam oradigital camcorder, consider using the system-supplied universal serial bus (ယူအက်စ်ဘီ) Video Class driver, Usbvideo.sys. The USB Video Class (UVC) driver isaMicrosoft-provided AVStream minidriver that provides driver support for USB Video Class devices. When your device uses UVC, you do not need to supply your own driver. အစား, the device works automatically with the system-supplied driver.
Beginning with Windows 8, the H.264 video codec (encoder/decoder) is supported. H.264 is an open standard that allows efficient video compression techniques for reducing the use of network bandwith and storage space. This leads toahigher video quality foragiven bit rate. ပိုမိုသိရှိလိုပါက, see USB H.264 Video Cameras Support. Also refer to theMicrosoft Proposed Extensions to the USB Video Class for H.264.
Password ကို: os-ကြီးများ
အားဖြင့် OS ကို-STORE
Kodak EasyShare C195 ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ, အဘယ်သူမျှမသင်ယူ Curve နှင့်အတူဒါဟာသုံးပါ
Samsung က 64-နည်းနည်းက Windows စီပီယူ Intel က Nokia က HD Graphics device ကိုမော်ဒယ် ပရိုဆက်ဆာ processor ​​ကို Software များ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု နည်းပညာ မိုဘိုင်းဖုန်း HTC က ဥပဒေရေးရာအနက် ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Technology_Internet OS ကို-STORE စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ
Qualcomm မှ Intel က Samsung က Technology_Internet စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ဥပဒေရေးရာအနက် စမတ်ဖုန်းများ Nokia က ပရိုဆက်ဆာ OS ကို-STORE မိုဘိုင်းဖုန်း 64-နည်းနည်းက Windows နည်းပညာ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Intel က Server ကို စီပီယူ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ device ကိုမော်ဒယ် Software များ Samsung ရဲ့ Galaxy ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု HTC က Sony Ericsson က processor ​​ကို HD Graphics